Stella Immanuel Emere Ego COVID-19 - Nigerian, African & Global Stori
Rave News Digest: Dr. Stella Immanuel Emere Ekwu Banyere Hydroxylchloroquine, Ndị Chainsmokers N'okpuru Nchọpụta, Real Madrid Striker Exam Positive For Coronavirus + More
Ndepụta nke kachasị mma: Izu ụka gara aga, ndị na-eme ememme wulitere Tempo na Ọhụụ
Nigerian Doctor Stella Immanuel na-akwado ọgwụgwọ COVID-19 na US, ndị Chainsmokers nke gọọmentị New York na-enyocha, onye ọkpọ Real Madrid na-enyocha ihe dị mma maka coronavirus. Nọgidenụ mara na Rave News Digest nke na-achịkọta akụkọ ise kachasị ewu ewu ịchọrọ ịchụkwudo, na-azọpụta gị oge na ume. Tụlee ya na akụkọ ụbọchị gị. Dr Stella Emmanuel.
1. Dọkịta ndị America bi na United States na-akwado ọgwụgwọ hydroxychloroquine maka COVID-19
Onye dibia bekee bi na Nigeria, Stella Immanuel emeela ka ọ rịọ arịrịọ maka iji hydroxychloroquine maka ọgwụgwọ COVID-19.
Vidiyo nke arụmụka ya iji kwado ọgwụgwọ a na-agbagha agagharị agagharị ma na-elele ihe karịrị nde iri na atọ na Facebook na YouTube, mana saiti abụọ ahụ wedata vidiyo ahụ.
Na agbanyeghị, a na-ekerịta vidiyo ahụ na WhatsApp, Twitter, Messenger, na nyiwe ozi ndị ọzọ. Stella Immanuel bụ akụkụ nke otu ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike gara Mgbakọ Nnọchite Egwu America nke n'ihu na Americalọikpe Kasị Elu nke United States na Washington, DC na Mọnde, Julaị 27. Dr Stella Emmanuel.
2. Akufo-Addo katọrọ ịgba nwanyị nwanyị dị afọ 90, na-akpọ ka o mee nyocha ngwa ngwa
Onye isi ala Akufo-Addo
president Akufo-Addo esonyela ndị Ghana n'ofè obodo ahụ na-akatọ ogbugbu ọjọọ nke nwanyị dị afọ 90 Akua Denteh. Madam Akua Denteh na-acha uhie uhie n'ehihie na Kafaba na East Gonja Obodo nke Mpaghara Savannah. Otu nwa agbọghọ onye nchụ-aja na mpaghara ahụ boro ya ebubo na ọ bụ amoosu.
Onye isi ala ahụ kọwara ihe a dị ka ihe arụ na ihe nwute ọ gbara ndị ọrụ nchekwa ume ka ha hụ na ewebata ngwa ngwa nke ikpe n'okwu a. Onye isi ala Akufo-Addo mere ka nke a mara mgbe a na-enye ọrụ ngo cedi nde mmiri ise na Yapei na Central Gonja District nke Savannah.
3. Dlamini-Zuma 'nwere ike tufuo ikike mkpọchi' n'ihi usoro iwu
Helen Suzman Foundation (HSF) na-eme ihe gbasara iwu megide iwu gọọmentị mejupụtara iwu mkpọchi mkpọchi, na-ebo onye isi ala na ndị ozi ya ọ họpụtara maka 'ileba anya na nzuko omeiwu'. Ndị otu a na-achụ ụlọ ikpe, na-elekwasị anya na iwepu 'ikike kachasị' nke ha nwere Nkosazana Dlamini-Zuma. Dr Stella Emmanuel.
HSF wepụtara akwụkwọ akụkọ na ehihie Tuesday, na-ekpughe na ha ga-enye ndị isi Kabọt ruo etiti August ka ọ zara. Agbanyeghị, ha na-ezube ime ka ikpe a n'ụlọ ikpe n'ime otu ọnwa, na-ahazi Tuesday, August 25 dị ka ụbọchị kachasị amasị ha maka mbuso agha n'okwu ikpe - izu anọ kpọmkwem site taa.
Dabere na ntọala ahụ, ọnwa anọ nke mkpọchi mkpọchi ahụ hụrụ iwu na mgbochi ndị Iwu Coronavirus Command Council (NCCC) nabatara naanị - na mmebi iwu nke Iwu ahụ.
4. Ihe ngosi Chainsmokers buchara ihe nyocha New York steeti
Andrew Taggart nke Chainsmokers rụrụ na July 25, 2020, na Water Mill, NY
Egwuregwu eletrọniki ama ama Ndị Chainsmokers na-eche mba dị iche iche nkatọ na ntanetị mgbe egwu bọọlụ sitere na ngwụcha ngwụcha izu na Southampton, New York, wee banye n'ọrịa. Igwe ihe ngosi dị iche iche nke ihe nkiri ahụ, nke ọtụtụ ndị ọrụ Twitter kesara, gụnyere New York Gov. Andrew Cuomo, gosiri ìgwè mmadụ guzo n'otu ubu. Ọ bụghị mmadụ niile yi nkpuchi.
Egwuregwu a, dị ka webụsaịtị ihe omume gọọmentị mere, ka ebumnuche dị mma maka nnọkọ nchekwa, yana ndị bịaranụ chọrọ ịnọ n'ime otu ụgbọ ala ha wee kwe ka ha pụọ ​​iji ụlọ mposi, ebe ha ga-achọ ikpu nkpuchi.
Mana eserese na foto sitere na ihe omume ahụ apụtaghị na usoro ndị a, nke kpaliri Kọmịshọna steeti New York, Dr. Howard Zucker, iji ziga onye isi obodo Southampton akwụkwọ ozi, Jay Schneiderman, na Mọnde.
5. Mariano: Onye egwuregwu Real Madrid nyochachara maka COVID-19
Mariano agbagowo ihe mgbaru ọsọ 10 n'ime egwuregwu 40 na asọmpi niile maka Real Madrid, yana ọtụtụ ihe ngosi ya na-abịa dị ka onye dochie
Onye egwuregwu Real Madrid Mariano enyochala ihe dị mma maka COVID-19, klọb ahụ kwuru na Tuesday. Nkwupụta kwuru na onye ọkpụkpọ a mụrụ Spanish dị afọ 26 nọ na ahụ ike zuru oke ma na-agbaso ụkpụrụ nchebe ịdị ọcha n'ụlọ. Ọ bụ onye na-edochighị anya maka egwuregwu ikpeazụ nke Real - egwuregwu 2-2 na La Liga pụọ ​​na Leganes na July 19.
Madrid ga-egwu Manchester City n'ụkwụ nke abụọ nke ikpeazụ Champions League na Fraịde, Ọgọstụ 16. UEFA, onye na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na Europe kwuru na ọ bụ. “Mgbe ị na-akpọtụrụ klọb ahụ ma na-ahụ maka ọnọdụ na mkpebi nke ndị isi obodo Spain dị mkpa.”
Ha gbakwụnyere: Anyị kwenyesiri ike na ikpe a agaghị emetụta nyocha egwuregwu ahụ mgbe niile. " Dr Stella Emmanuel.
Rave News Digest: Nicki Minaj kpughere nwanyị ọ dị ime, Ọrịa Coronavirus Vigcine Triggers, Jud Bellingham + More
Radị Rave July 28, 2020
Uche Mọnde: Tozọ Isi Nwee Ezi Ncheta Dị Ka 'Onye Nke Na-ahụ Anya'